Inguz rune, waa maxay macnaheeda? | Tattoo
Inguz rune, waa maxay macnaheeda?
La rune inguz, oo loo qori karo siyaabo kala duwan, waxaa loola jeedaa ilaah qadiim ah oo Viking ah ... Oo waliba waxay ku habboon tahay dhiirrigelin cusub tattoo.
Ma rabtaa inaad ogaato macnaheeda? Waxaan hoos ku aragnaa!
1 Halyeeygii la xiriiray Yngvi, boqorkii iswiidhishka
2 Macnaha Rune
Halyeeygii la xiriiray Yngvi, boqorkii iswiidhishka
Yngvi ama Freyr, waa boqorka halyeeyga ah ee ay inguz rune magaceeda ka qaadato.
Rune inguz, oo sidoo kale loo yaqaan inwaz, ahna wakiilka codka [ŋ], ayaa loo qori karaa siyaabo kala duwan. Waxay u muuqataa in asalkeedu yahay Yngvi, taas oo iyaduna noqon karta ilaaha Freyr (Freyr macnaheedu waa 'sayid'). Sida laga soo xigtay halyeeyga (inkasta oo ay jiraan noocyo badan), waxaa la sheegaa in Odin uu ka yimid Aasiya oo uu qabsaday dhulalka waqooyiga. Kadib, wuxuu Danmark siiyay wiilkiisa Skjöldr iyo Sweden wiilkiisa Yngvi.
Sidaa darteed, Yngvi wuxuu ka mid noqday boqorradii ugu horreeyay ee halyeeyga Iswiidhan, runtiina waxaa la rumaysan yahay inuu ka mid yahay awoowayaasha qoyska boqortooyada Iswiidhan.. Wuxuu la xiriiraa barwaaqo, goyn wanaagsan, bacrin, cimilo wanaagsan, nabad iyo raaxo, isaga oo ka dhigaya, sida aad u malayn karto, inuu yahay ilaah aad loo qiimeeyo.
Mid ka mid ah halyeeyada ugu caansan ee boqorkan halyeeyga ah waa midka ka sheekeeya qisadiisa jaceyl ee ilaaha Gerðr, laakiin, ilaahadda inay xaaskiisa noqoto, Yngvi waa inuu seeftiisa dhigaa. Taasi waxay sababi doontaa dhimashadiisa inta lagu guda jiro Ragnarök.
Macnaha runtaan ayaa inta badan laga soo qaatay shaxanka aan hada soo sharaxnay. Inguz waa astaan ​​jacayl, nabad iyo wada noolaansho, laakiin sidoo kale galmada (Uma ahayn Yngvi ilaaha bacriminta).
Rune sidoo kale wuxuu leeyahay macno ah ilaalin iyo dhammaystir. Inguz wuxuu aad ula xiriiraa macnahiisa bacriminta, inguz wuxuu sidoo kale laxiriiraa abuur ay wax ka soo baxayaan, taas oo muujineysa isbadal cusub iyo bilow cusub.
Sidaad u aragto, inguz rune wuxuu leeyahay halyeey iyo macno aad u xiiso badan, oo ku habboon inuu nagu dhiirrigeliyo tattoo cusub. Noo sheeg waxa aad u malaynayso faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos leh xarfo » Inguz rune, waa maxay macnaheeda?
Tattoos iyo maqaarka oo adkeeya
Tattoo-ga arooska, fikradaha haddii aad guursaneysid